5 xeeladood oo la isaga ilaaliyo tuugada - Muraayad
5 xeeladood oo la isaga ilaaliyo tuugada
Qaabka la isaga ilaaliyo tuugada | Image Credit: Brightside
8 cabitaan oo caloosha lagu yareeyo
7 qaab oo looga hor tago cudurrada wadnaha
4 arrimood yaysan ku dhaafin caawa oo ah 15-ka bisha Shacbaan
5 cunto oo kalyaha dilaya balse aan laga maarmin
Dunida waxaa ka dhaca malaayiin fal oo tuugo ay dad ku dhacaan ama guryahooda ku jabsadaan, kuwanina waa xeelado kaa caawin kara inaad iska ilaaliso.
Waddanka Mareykanka oo kaliya 2.5 milyan oo jeer ayaa sanad walba qof la dhacaa, 65% ka mid ah falalkaasna waxaa lagu bartilmaameedsadaa guryaha. Dhammaan dunida inteeda kalena tiradu sidaas unbay u badan tahay.
Haddaba xeeladahan adeegso, waxaa suurtagal ah inay ku anfacaan.
1- Baraha bulshada hasoo dhigin sawir muujinaya meesha aad joogto
Dhammaanteen waan jecel nahay inaan nolosheenna kusoo bandhigno baraha bulshada, laakiin inaad tilmaanto goobta aad joogto waxay leedahay khatar.
Tuugada aad bartilmaameedka u tahay waxaa laga yaabaa inay mar walba kormeer kugu hayaan, ayna kugu raadinayaan fursad ay kaaga qaataan waxyaabaha qiimaha leh ee ay kugu arkeen ama kugu tuhmayaan.
Sidaas darteed marka aad sawirrada galeyso iska ilaali inay muuqdaan calaamado qeexaya meesha aad ku sugan tahay. Intaas kaddib ku dadaal in aadan shaacinin waxyaabaha maalinlaha ah ee aad sameyso, sababtoo ah tuugadu waxay ogaan karaan marka aad gurigaaga ka maqan tahay si ay u jabsadaan.
2- TV-ga ama Raadiyaha oo daaran ka tag marka aad ka baxeyso guriga
Inta badan tuugadu marka ay guri jabsanayaan waxay garaacaan albaabka ama gambaleelka, marka ay wax shanqar ah waayaanna waxay go’aansadaan inay gudaha galaan iyagoo albaabka jabinaya.
Hase yeeshee, haddii ay maqlaan codka tv-ga ama muusiko gudaha ka yeereysa waxay u badan tahay in ay iska tagaan maadaama ay u maleynayaan in guriga la joogo.
Haddii aad safar ku maqantahay, waxaad isticmaali kartaa qalab casri ah oo adigoo maqan aad daari karto marna damin karto. ogow xilliyada ugu badan ee guryaha la jabsado waa subaxdii iyo duhurkii.
3- Sawirka furahaaga ha dhigin baraha bulshada
Mararka qaar dadku waxay sawirka furahooda soo galyaan baraha bulshada, iyagoo aan xitaa ka war qabin. Arrintaas waxay horseedi kartaa khatar kaaga imaata dhinaca tuugada. Adigoo sawir kale iska qaadaya ayaa laga yaabaa inuu furaha soo galo sawirkaas, adigoo ku baraarugsaneyd.
Qof la socda tallaabo kasta oo aad qaaddo ayaa copy ka sameysan kara sawirka furahaaga, wuxuuna ku guuleysan karaa inuu sameeyo mid la mid ah.
Kaliya wuxuu u baahan yahay tuugga inuu soo dagsado app scan gareynaya furaha oo mid la mid ahna sameynaya. Kaddibna toos ayay u furan karaan gurigaaga.
4- Gasac kuul ka buuxdo dhig albaabka
Gurigaaga haddii aad joogto ama haddii aad ka maqan tahayba, albaabka meel ku aaddan dhig gasac ay kuulo ku jiraan.
Haddii uu qof soo galo wuxuu albaaba ku dhufanayaa gasicii, sidaasna waxaa ku firxanaya kuulaha. Waxaa hubaal ah inuu islamarkiiba ku mashquulayo aruurintooda si uusan u fashilmin tuugga.
Labo arrimood oo ay taas kaa caawin karto mid ka mid ah waa in haddii aad joogto aad durbadiiba maqleyso shanqarta kuulaha dhulka ku daatay islamarkiina aad feejignaaneyso iyo tan labaad oo ah in marka aad soo laabato aad horay ka fahmeyso in lagu jabsaday booliskana u wacdid intay goori goor tahay.
5- Dariskaaga baro
Xaafadaha ay bulshadoodu yar yihiin, tuugada waa laga gartaa dadka kale. Sababtu waxay tahay in qof walba oo xaafaddaas daggan uu ka taxaddaro qofka kale.
Xitaa haddii aad maqan tahay, darisku waxay mar walba isha ku hayaan gurigaaga, wayna la socdaan qof walba oo kasoo ag dhawaada, haddii uu wajigiisa ku cusub yahay.
Haddii aad ahayd qof xirxiran oo dariskiisa kasii jeeda, maantaba billow inaad dabeecaddaas iska baddasho, si aad faa’iido u hesho.
Previous article7 xeeladood bar carruurtaada si ay noloshooda u maareeyaan
Next articleWaa tee arrinta ugu weyn ee sababta cirrada timaha?
Sida ugu fiican ee aad uga hortagi karto inuu kugu dhaco cudurka Sokorowga
Haddii uu Ruushka ka guuleysto Ukraine waxay dhabar jab ku tahay Turkiga(Sababtana waa tan)
© muraayad. All rights reserved. Muraayad 2022